Ebe ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain: si Granada ruo Soria | Akụkọ njem
Louis Martinez | | Spain obodo, Ihunanya
E nwere ọtụtụ ebe ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain. Ha bụ obodo ndị nwere aura ịhụnanya. Na mgbakwunye, ha na-enwekarị akụkọ ihe mere eme puku afọ na ọtụtụ ihe ncheta. Ma, karịa ihe niile, ha jupụtara na akụkọ ifo, ọtụtụ n'ime ha, kpọmkwem, banyere ịhụnanya na-enweghị obi ụtọ.
Enwere ọtụtụ ebe dị otú a na Spain na ọ gaghị ekwe omume anyị ịgwa gị gbasara ha niile. Agbanyeghị, anyị na-emesi gị obi ike na ọ bụrụ na ịga leta ndị anyị ga-atụ aro, ị gaghị akwa ụta. Ị ga-anọ ọmarịcha ọnụnọ gị na onye òtù ọlụlụ gị abụọ ga-enwe a ebe nchekwa echefu. Mana, na-enweghị mmasị ọzọ, anyị ga-egosi gị ụfọdụ n'ime ebe ndị ahụ ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain.
1 Ebe ise enweghị ike ime njem dị ka di na nwunye na Spain
1.3 Salamanca, ebe ọzọ ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain zuru oke
Ebe ise enweghị ike ime njem dị ka di na nwunye na Spain
Anyị ga-amalite njem anyị nke ebe anyị ga-eme njem dị ka di na nwunye site na Spain na Andalusia akụkọ ihe mere eme wee bịaruo ebe ndị ọzọ nso. N'ime obodo a, anyị nwere ike ịgwa gị okwu gbasara ya Jaén ma obu nke Sevilla, ma eleghị anya obodo kacha nwee ịhụnanya bụ Granada.
Mpaghara Sacromonte, na Granada
Obi abụọ adịghị ya, obodo Andalusian a bụ otu n'ime ndị kasị mma na Spain ileta dị ka di na nwunye. Ọ nwere ọtụtụ ebe mmasị na njem na Granada na-achọ ọtụtụ ụbọchị. Ma ọ bụ enweghị mgbapụ ileta Alhambra, obodo Nasrid oge ochie kwuputara Ebe Ihe Nketa Ụwa. Na, n'akụkụ ya, ndị Izugbe, ya na obí ya na ọmarịcha ubi ya.
Ị ga-agụnyekwa ịgagharị n'ógbè ya na-ahụkarị na nleta gị na Granada. Karịsịa, ị ga-ahụ Albaicin, na okporo ámá ya dị warara na ụlọ ndị ọcha chara acha, na ndị Sacromonte, ya na ọgba ya ndị na-eje ozi dị ka ebe obibi.
Ọzọkwa, ị na-ekwesịghị ichefu banyere Katidral nke anụ ahụ, weere otu n'ime ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Spanish Renaissance, ma ọ bụ nke Ụlọ ọrụ Charter, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX. Ihe a niile na-echefughị Chalọ Royal, ụlọ Gothic kacha mkpa na Granada.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere ebe ịhụnanya na obodo Nasrid, ọ bụ ya Uche nke Saint Nicholas. Gaa leta ya na ọdịda anyanwụ, ị ga-enwe ọmarịcha echiche pụrụ iche nke Alhambra. Iji kwụsị nleta gị na Granada, nụrụ ụtọ ụfọdụ tapas ya. Na omenala, a na-enye ha n'efu na oriri na ụfọdụ n'ime ha bụ aubergine e ghere eghe, chopitos, dogfish marinated ma ọ bụ eri.
Mpaghara tapas ọdịnala bụ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze, nke okporo ụzọ Darro na nke Realejo. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ọbịa niile dị n'obodo ahụ na-atọ ha ụtọ nke ukwuu.
Teruel Town Hall na Katidral
Obodo Aragonese a, nke ọbụna nwere akụkọ akụkọ yiri nke Romeo na Juliet, enweghị ike na-efu na njem anyị na-eme njem dị ka di na nwunye na Spain. Ọ bụ kpọmkwem nke Ndị hụrụ Teruel n'anya, Isabel de Segura na Diego Marcilla.
Maka ha, a na-akpọkwa Teruel dị ka Obodo Ịhụnanya, na otu n'ime nleta ị nwere ike ime na obodo Aragonese ga-ekpughe kpọmkwem akụkọ Isabel na Diego. Anyị na-agwa gị gbasara Mausoleum nke ndị hụrụ n'anya, nke, na mgbakwunye na ili ya, ị nwere ike ịhụ ihe ngosi dum metụtara oge na ọnọdụ nke ịhụnanya ya na-enweghị obi ụtọ.
Ma Teruel karịrị ndị hụrụ n'anya. O nwere ihe nketa nke Mudejar architecture nke ekwuputala ka ọ bụrụ saịtị ihe nketa ụwa. Ọ bụ, n'etiti ụlọ ndị ọzọ, ụlọ elu na elu ụlọ nke Katidral Santa María na ụlọ ụka San Pedro, San Martín na El Salvador. N'ụzọ dị iche, nnukwu ọwa mmiri Los Arcos bụ Renaissance.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịga n'ihu n'oge, na nso obodo ị nwere Dinopolis, ogige isiokwu a raara nye dinosaur nke bi n'ógbè ahụ n'oge ochie.
N'ikpeazụ, ị ga-aga eleta ihe nketa Teruel nke ihe owuwu ọgbara ọhụrụ. Ọ na-aza, dị na ya ochie ụlọ, ka neo-mudejar style. Ma ọ bụ ihe owuwu dị ka San Nicolás de Bari, ụlọ akwụkwọ ochie nke Arrabal, ụlọ ahịa ọgwụ nke Ụlọ Ọgwụ Provincial, Casino ma ọ bụ Plaza de Toros.
Ma ị gaghị ahapụ obodo Aragonese na-enweghị ịgafe nke ọma Torico square. Gburugburu ya, ị nwere ụlọ mmanya na ụlọ nri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri Teruel mara mma. N'ime ya, ham a gwọrọ na-apụta ìhè, kamakwa efere dị ka nwa atụrụ a ghere eghe, partridge na pickled oke bekee ma ọ bụ trout. Na, maka sweets, ịhụnanya na-asụ ude ma ọ bụ Mudejar braid.
Salamanca, ebe ọzọ ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain zuru oke
Huerto de Calixto na Melibea
Ọzọkwa Salamanca akụkọ ihe mere eme bụ ebe zuru oke iji mee njem dị ka di na nwunye na Spain. N’ezie, akụkọ ịhụnanya ọzọ nke akwụkwọ anyị na-ewere ọnọdụ n’ebe ahụ. Anyị na-agwa gị gbasara ya Calixto na Melibea, abụọ nke protagonists nke Celestine. Na, kpọmkwem, n'akụkụ àkwà mmiri Rome na mgbidi obodo bụ nke ya Akwukwo nri patch, Ogige ndị Alakụba.
Mana Salamanca na-enye gị ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga-ahụ. Njegharị ọ bụla ga-amalite na Main Square, Ụdị Baroque ma weere ya dị ka otu n'ime ndị kasị mma na mba anyị. I kwesịkwara ịga leta katidral ya n'obodo ahụ. Nke ochie sitere na narị afọ nke XNUMX na Romanesque, ebe nke ọhụrụ bụ Gothic na nke XNUMXth.
Enwere ọtụtụ ụlọ okpukpe ndị ọzọ mara mma na Salamanca. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ekwu maka ụka San Marcos na nke Mmụọ Nsọ na ebe obibi nke Las Claras, San Antonio el Real na San Esteban.
Mana ị ga-aga Salamanca maka ọmarịcha ihe nketa nke ụlọ obodo. Otu n'ime ha Mahadum na ndị ewu ewu Oflọ Shell. Na n'akụkụ ndị a, nke kọleji na obí Monterrey, Anaya, Don Diego Maldonado ma ọ bụ Orellana.
Na nkenke, naanị anyị enweela ike ịkọ obere akụkụ nke ihe nketa dị egwu nke Salamanca n'ihi na ọ bara ụba na ọ chọrọ ihe karịrị otu nleta. Echefula na oku a Obodo Ochie Ọ bụ ebe a natara World Heritage.
Ọ bụrụ na anyị agwa gị maka ya ubi camelliaAnyị ga-enyerịrị gị ihe mere ị ga-eji gaa Pontevedra dịka di na nwunye. N'ihi na ụdị ifuru a nwere mmetụta ịhụnanya dị ukwuu ma dị na ogige ntụrụndụ obodo niile, ma ọ bụrụ na ị gaa na ya n'oge oyi.
Mana Pontevedra bụkwa nnukwu ihe ịtụnanya. Na ya ochie obodo ị ga-aga na Basilica nke Santa Maria la Mayor, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX, na, dị nnọọ nso na ya, Plaza Teucro, nke e ji mee ya. ụlọ ndị baroque dị ka Gago, Montenegro ma ọ bụ Pita.
N'akụkụ ya, na gburugburu Plaza de la Ferrería bụ ebe obibi ndị nọn nke San Francisco na Churchka La Peregrina. Na, ntakịrị n'ihu, akwa mmiri mgbe ochie nke El Burgo na Ụlọ ihe ngosi nka nke Pontevedra, nke nwere nnukwu ọmarịcha ihe ịchọ mma ọla edo.
A ije site na n'ikpere mmiri Lérez ọ bụkwa ihunanya nke ukwuu. Na, ọ bụrụ na ị na-eme ya site na akụkụ ugwu ya, ị ga-ahụ, na mgbakwunye na okike, agwaetiti nke Sculptures, bụ ebe arụnyere ọrụ nke ndị edemede Galician dị iche iche.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nọrọ na parador de turismo, ụlọ nke narị afọ nke XNUMX, wee gafere Plaza de las Cinco Rúas, ị ga-erute mpaghara modernist site n'obodo ahụ, ebe enwere ọtụtụ ụlọ nke ụdị ụlọ a yana isi ụlọ ihe nkiri. N'ime ụlọ ndị a bụ Café Moderno, ụlọ ọrụ Post Office na, karịa ihe niile, mara mma Lourizán Palace.
Soria bụ obodo ebe Antonio Machado biri akụkọ ịhụnanya ya na Leonor Aka ekpe, muse nke ụfọdụ nnukwu uri ya. Nke a kwesịrị ịbụ ihe ga-ezuru gị ịhọrọ ya dị ka ebe ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain. N'ezie, ndị njem nke San Saturio, ebe hermitage nke otu aha dị, bụ ebe jupụtara na ịhụnanya.
Mana, na mgbakwunye, obodo Duero na-enyekwa gị ọmarịcha akụkọ ihe mere eme na ihe nketa. O nwere ọtụtụ Ụka Romanesque dị ka San Juan de Rabanera na Santo Domingo. O nwekwara Ebe obibi ndị Renaissance dị ka nke Nuestra Señora del Carmen na hermitage dị ka nke Nuestra Señora de la Soledad.
Otú ọ dị, isi ihe ncheta okpukpe na Soria bụ Co-Katidral nke San Pedro, nke na-echekwa akụkụ nke ụka monastic mbụ site na narị afọ nke XNUMX. N'ime ya, ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ebe ịchụàjà nke baroque dị ka nke ụlọ ekpere San Miguel na Santísima Trinidad.
Obodo Duero nwekwara ụlọ ndị mara mma dị ka nke Counts of Gómara na de los Ríos y Salcedo. Ma ihe kasị ukwuu akụ nke Soria bụ mkpọmkpọ ebe Numancia, nke dị naanị kilomita asaa. Egwupụtala obodo a na-akọ akụkọ ifo tupu oge Rom ma nwee ike ịga leta ya. Na mgbakwunye, ọtụtụ n'ime iberibe ahụrụ dị na Antlọ ihe nkiri Numantino.
Ọ bụghị naanị nke a ka ị ga-ahụ na Soria. Ihe na-atọkwa ụtọ nke ukwuu bụ Museum of Medieval nke San Juan de Duero, nke dị na ebe obibi ndị mọnk ahụ; Ụlọ ihe ngosi nka nke Diocesan-Katidral na Ụlọ nke Poets, nke dị na ụlọ nke Circle of Friendship.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ise n'ime ebe ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain. Ha niile na-enye gị akụkụ ihunanya, nnukwu ihe nketa na gastronomy na-atọ ụtọ. Mana anyị nwere ike ịgwa gị gbasara ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, Ronda, Obodo Malaga pụrụ iche bụ ebe ndị ohi nọ na ebe akụkọ ịhụnanya. Ma ọ bụ agwaetiti nke Ibiza, na ọdịda anyanwụ ya dị egwu. Ma ọ bụ, n'ikpeazụ, medieval nkume, na Segovia, ya na nnukwu ụlọ ya mara mma nke ndị hụrụ ibe ya n'anya na-enweghị obi ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ebe ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain